Archive du 20170614
Claudine Razaimamonjy Havotsotra tsimoramora ?
Samy maminavina izay ho tohin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy ny rehetra taorian’ny filazana ny namindrana azy eny amin’ny fonjan’Antanimora nanomboka ny alatsinainy hariva tokony ho tamin’ny 7 ora.
Force de changement Hampihetsi-bahoaka amin’izay
Henontsika ireny vavan’ny avy eo anivon’ny HVM ireny fa tsy mila fiaraha-mitantana, hono, izy ireo, hoy ny avy eo anivon’ilay vovonana politika Force de changement, raha nanohy ny fivoriany tetsy amin’ny AKFM Andravoahangy omaly.
Olona Hasin’ny Tany Hijoro hanavotra ny firenena
Manoloana ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena ankehitriny dia mijoro ny fikambanana Olona Hasin’ny Tany (OHT) ary milaza fa handray andraikitra amin’ny fanavotana ny firenena.
Filankevitry ny fampihavanam-pirenena Misokatra ny fisoratana anarana
Hisokatra anio ary tsy hifarana raha tsy ny 14 jolay izao ny firotsahana ho kandidà handrafitra ireo mpikambana ao anatin’ny filankevitry ny fampihavanana malagasy.
Fifidianana amin’ny 2018 Hampiady an-trano , hoy i Doudou
Amin’ny maha sendika ny tenako dia tsy hirotsaka velively amin’ny fifidianana ho avy hatao eto amin’ny firenena, eny fa na dia amin’ny fifidianana filoham-pokontany aza nefa dia tsy maintsy miteny kosa
Mivoaka miditra !
Miarahaba ry Jean a ! Dia tena gaga mihitsy aho amin’ity fihetsikareo mivoaka miditra isak’izay mandeha ity.
Fikaonan-doha amin’ny mpampiasa vola Any Johannesbourg anio sy rahampitso
Hotanterahina anio 14 jona sy rahampitso any Johannesbourg Afrika Atsimo ny fihaonana sy fikaonan-doha amin’ny mpampiasa vola, karakarain’ny sekretariam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny, misahana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana.
Ampitatafika Notetezin’ny kamio ny lohan’ilay vehivavy
Vehivavy iray manodidina ny 40 taona, mamo no fantatra fa maty voahitsaky ny kamiao teny Ampitatafika omaly antoandro, lalana miditra ho any an-tanàna, vao miala ny tetezana. Feno fasika ity kamiao ity, raha araka ny vaovao azo.
Iza sa ny inona ?
Iza sa inona no manetsika ireto mpanao fihetsiketsehana miha mitombo efa ho isan’andro tato ho ato ireto ? Ny mahagaga dia tsy ny fetezan-javatra efa am-polony taona maro daholo no izao vao hifandimbiasam-pilazana ho tsy azo ekena intsony.
Sekolin’ny marenina Notoloran’ny Airtel fitaovana marobe
Fikambanana iray miezaka manampy ireo ankizy manana olana ara-pihainoana eto amintsika ny Sekolin’ny Marenina Madagasikara eny Ambatoroka. Miisa 33 mianadahy ireo zaza beaziny ao ankehitriny ka ny 14 amin’ireo no kilasy mandry.
SEKOLY AMBONY IST Miezaka manome vahana ny voka-pikarohana
Fomba fiasan’ny sekoly ambony IST ( Institut Supérieur de Technologie) eto Antananarivo nanomboka tamin’ny 2016 ny
NY AMPINGA Namoaka mpikabary 150 mianadahy indray
Namoaka ny andiany fahasivy misalotra ny anarana “Antsiva” indray ny fikambanana Ny Ampinga ny faran’ny herinandro teo, fikambanana izay tsiahivina fa mampianatra kabary maimaimpoana.
Zandarimariam-pirenena Notoloran’ny UNESCO fitaovana
Notanterahana omaly talata 13 jona 2017 tao amin’ny Toby Ratsimandrava ny fifanaovan-tsonia teo anivon’ny zandarimariam-pirenena sy ny UNESCO mikasika ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta.
Nizara bodofotsy mafana iray sy baran-tsavony roa ho an’ny olona sahirana sy beantitra miisa 90 teny amin’ny fokontany Anosipatrana atsinanana omaly ny fikambanana ADRA.